Japana · Aogositra, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Japana · Aogositra, 2010
Tantara mikasika ny Japana tamin'ny Aogositra, 2010
Mediam-bahoaka 28 Aogositra 2010
Sendikà 16 Aogositra 2010
Mitsotsotra malaindaina eo ambanin'ny alokaloky ny elo eny amoron-dranomasina, ho mpizahantany ary hitsangatsangana manodidina ireo lalàn'ny tanàna mbola tsy fantatra miaraka amin'ny boky mpitari-dalana eny an-tanana, na tsotra fotsiny koa hoe mala aina ao an-trano manararaotra ny fotoana malalaka . Toa safidy tsy misy dikany ireo ho an'ireo mpiala sasatra - izany hoe, raha tsy mipetraka any Japana izy ireo .
Japana: Romana fahiny any amin'ny trano fandroana iraisana Japoney
Hehy 10 Aogositra 2010
Inona ny zavatra mampitovy ny kolontsaina roa mifanalavitra ara-potoana sy toerana tahaka an'i Roma fahiny sy Japana amin'izao fotoana? Mety ho ankamantatra ho an'ny maro izany fanontaniana izany kanefa dia nanome hevitra ilay mporatra manga Mari Yamazaki [ja] hamorona ny Thermae Romae, manga voalaza hitokanana sokajy vaovao - ny manga ‘fandroana’.
Japan: Hadisoana ve ny mihanika ny havoanan'i Fuji amin'ny tànam-polo?
Fanatanjahantena 01 Aogositra 2010
Raha misy hazo midaraboka any an'àla nefa tsy misy olona afaka handre izany eo amin'ny manodidina eo, dia ho olana ve raha mitalakotrokotroka na tsia izany arakarak'izay nanaovan'ilay hazo azy teo? Nandinika lalina momba ny tendrombohitra, ny môraly/fitondrantena, ary ireo hafatra ao anaty lahatsoratra iray amin'ny teny Japoney mitondra ny lohateny hoe "Hadisoana ve ny mihanika ny havoanan'i Fuji amin'ny tanam-polo?", ilay mpitoraka blaogy Zope.